Ahoana ny fampifandraisana ny SEO amin'ny fampivelarana sy ny votoaty?
Ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny tranonkala dia mila fiaraha-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nefa amin'ny fomba ahoana no tokony hampifangaroanao SEO miaraka amin'ny fampiroboroboana sy ny votoatin'ny vokatra tsara indrindra? Eny, miankina izany.
SEO sy ny paikady fampandrosoana
Voalohany indrindra amin'ny tetikady ara-barotra ankapobeny. Midika eto aho fa indrindra indrindra ny fikarohana nataonao, izay mametraka fototra fototra ho an'ny drafitrasam-pampitam-baovaonao ho an'ny SEO, dia tokony ho tafiditra tanteraka amin'ny tetikady ankapobeny amin'ny fampiroboroboana amin'ny aterineto.
Raha jerena ny marketing ara-dizitaly sy ny SEO, ny fampivoarana ny fahatakaran'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fikarohana fikarohana manan-danja dia fomba lehibe hikolokoloana ny fikasana sy ny fanontaniana tena misy eo amin'ny vondron'olona kinendry. Azonao atao, ohatra, ny miezaka manatsara ny fikarohana, indrindra momba ny fikarohana lalindalina momba ny teny fohy, mety hametraka tetikady maharitra ho an'ny fampiroboroboana ny tranokala sy ny famolavolana tetikasa.
Fomba fanatontosana sy fanapahan-kevitra atao
Raha jerena ny asa sasany misy ny lanjany amin'izao fotoana izao, ohatra amin'ny tetikady misy anao, Azo antoka fa mirakitra ireo sehatra rehetra ilaina amin'ny tombontsoam-bahoaka sy lohahevitra tsirairay izay matetika mampita ny lanjan'ny mpitsidika ny pejy web-nao. Hatramin'ny fomba fijerin'ny SEO sy ny fampandrosoana amin'ny lafiny lehibe, ny tanjona misy anao sy ny fomba hahatanterahany dia ho voavaha koa.
Ohatra, fanapahan-kevitra momba ny halehiben'ny fanentanana ara-barotra (tokony hatao ho mikrosita miavaka izany) na angamba ho toy ny ampahany vao tafiditra amin'ny tranokalanao efa misy?), Ary ny sisa Ny fiheverana hafa mahakasika ny drafitra web anao sy ny SEO miaraka amin'ny fampandrosoana (ohatra, momba ny hoe ny flashy sy sary-satry ny tranonkala vaovao dia tokony ho.
SEO sy ny traikefa amin'ny User
Ho an'ny traikefa mpampiasa tsaratsara kokoa sy ny tranokalan'ny tranokala mety dia azonao atao ny mangataka amin'ny fanamarinana sitemaps, wireframes ary ny fanekena ny fizahana ho an'ny fizarana tsirairay ao amin'ny tranonkalanao. Midika izany fa mifampiraharaha amin'ny ekipa noforonina SEO ianao hanova ny teti-bola manerantany ho an'ny fantsona mpampiasa tsara indrindra sy ny navigateur pejy mankany amin'ny tranonkala tena ilaina.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, SEO amin'ny fehezan-teny maotera dia mety tena ilaina tokoa amin'ny fananana haingam-pandeha amin'ny traikefa an-tserasera sy ny fiarahamonina namana amin'ny alàlan'ny tranonkalanao.Satria ny fikarohana fototra momba ny SEO dia mampiseho ny tanjon'ny olombelona sy ny zavatra ilaina amin'ny fotoana iray. Amin'izany fomba izany, ny SEO dia afaka manome ny hazavana maitso hanombantombana farafaharatsiny ny vokatra azo tsapain-tanana amin'ny fampidirana na fanesorana fizarana voafaritra amin'ny votoatiny, ary koa ny fandinihana ny lisitr'ireo rakitra vaovao na fizarana fizarana.
SEO sy Global Focus
Farany, ny tranonkala rehetra mitantana tetikady mety amin'ny Search Engine Optimization dia tanjona iray ihany - mivarotra orinasa maromaro kokoa. Indraindray, maro amin'ireo mpandraharaha amin'ny aterineto sy webmasters no mandany ity lohahevitra tsotra ity satria mifantoka amin'ny ezaka ataony amin'ny asa hafa aty. Raha toa ka mitranga izany, ny zavatra rehetra ilainao dia manao dingana iray mba hamerenana ny hevi-dehibenao amin'izao fotoana izao amin'ny tanjona maneran-tany. Firy mafy ny fiantraikan'ny SEO eo amin'ny mpivarotra anao, ary koa ireo tsy mivadika indrindra? Inona no vokatr'izany eo amin'ny fanapahan-kevitra farany hividianana azy? Amin'ny fomba ahoana no hampitomboanao ny fifamoivoizana momba ny fikarohanao sy ny fivoarana?
Na ahoana na ahoana, ny zavatra rehetra ilainao dia ny hahatsiaro fa ny SEO dia mampihomehy foana ny zavatra tsara indrindra ho an'ny fanatsarana ny fikarohana, ary inona no tokony hatao mba hanatsarana ny fampiroboroboana ny orinasa , tetika fampandrosoana ankapobeny, traikefa amin'ny mpampiasa, sns Source .